Iminenke ye-Aquarium. Yonke into ekufuneka uyazi | Ngeentlanzi
Xa siqala ukubeka yonke into efunwa yi-aquarium, unokucinga ukuba uyafuna Imigibe ye-aquarium. Iminenke ye-Aquarium ithathwa njengezilwanyana eziyimfuneko ekusebenzeni kakuhle kwe-aquarium. Kude kube kutshanje, bekukho ukuqonda okungalunganga komsebenzi ozalisekiswa zezi zilwanyana, kuba bekucingelwa ukuba zitya izityalo esizifaka kwitanki leentlanzi. Namhlanje kuyaziwa ukuba ezi zilwanyana zithobekile kwaye zithandwa kakhulu.
Ke ngoko, siza kulinikela eli nqaku ukuba likuxelele zonke iimpawu, ukusebenza kunye nezona nkumba zintle ze-aquarium.
1 Kutheni le nto iinkumba zivela kwi-aquarium?
2 Iindidi zeenkonkxa zamanzi amatsha
3 Imigibe ye-aquarium yaselwandle
4 Unyango lweminenke ye-aquarium
5 Ngaba unokufumana isifo senkumba kwi-aquarium?
6 Uyisusa njani iminenke kwi-aquarium
Kutheni le nto iinkumba zivela kwi-aquarium?
Imigibe inokubandezeleka kwi-aquarium yethu ngeendlela ezahlukeneyo. Eyokuqala ngabom. Imigibe yaziwa ngokuba neenzuzo ezinkulu kwi-aquarium. Ngesi sizathu, uninzi lwabantu luthatha isigqibo sokungenisa iminenke kwi-aquarium yabo. Enye indlela yi-incognito. Kukho iindawo zokugcina izityalo esizibekayo kwi-aquarium apho banokuphuhla khona. Ngamanye amaxesha baba sisitshabalalisi ngokuxhomekeke kwiimeko kwitanki leentlanzi.
Into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba uninzi lwezi nkumba zizinto eziphilayo ezinomdla kakhulu. Umzekelo, iintlobo IMelanoides tuberculata yi-bioindicator yenkumba yokungabikho kweoksijini emanzini. Ukuba i-aquarium yethu ayinayo ioksijini emanzini, le nkumba iya kuvela rhoqo. Oku kuyakubonisa ukuba siya kuyidinga i- ioksijini yasemanzini.
Kuya kufuneka uqonde ukuba iinkumba azikho mbi. Ziluncedo kakhulu xa kufikwa ekukhutsheni i-algae kwiindonga zetanki, zitya ukutya okuseleyo kweentlanzi, zincedisa ekukhutsheni iintsalela zezityalo ezifileyo kwaye zisebenze njengezinto eziphilayo. Singatsho ukuba banokusinceda ukugcina ukucoceka ngokuchanekileyo kwi-aquarium ngendlela efanelekileyo.
Iindidi zeenkonkxa zamanzi amatsha
Kukho iintlobo ngeentlobo zeminenke ngokuxhomekeka kuhlobo lwendidi nohlobo lwamanzi ahlala kuyo. Siza kuhlalutya ukuba zeziphi iintlobo zeenkumba zamanzi amatsha.
Umnumzana Helena: ikwaziwa njengegama eliqhelekileyo lenkumba yokubulala. Yimollusk enokulinganisa malunga neesentimitha eziyi-2.5 kwaye ineqokobhe elilukhuni elinemilo etsobhileyo. Iyabonakala ngokulula njengoko inemibala etyheli namdaka ngombala wokujikeleza. Olona phawu luphambili lwale nkumba kukuba iyonakalisa kakhulu. Ke ngoko, isetyenziselwa ukuphelisa izinambuzane ezahlukahlukeneyo kwiindawo ezinamanzi. Ukuba uyayinyamekela, inokuhlala iminyaka emi-5.
IPomacea canaliculata: yinkumba enegobolondo elingqukuva. Umbala wayo umdaka kwaye utyheli kwaye uneeorenji kunye namabala amisiweyo. Iyaziwa ngegama eliqhelekileyo lenkumba yeapile yezityalo. Inobungakanani obukhulu beesentimitha ezi-7 kwaye inezinga eliphezulu kakhulu lokuvelisa kwakhona. Iyakwazi ukuhlala kwiindawo ezingenayo ioksijini encinci.
IMelanoides tuberculataKukwaziwa ngegama eliqhelekileyo lenkumba yaseMalaysian okanye yenkumba ixilongo. Iqokobhe lalo lide kwaye lineqokobhe elimdaka ngombala. Ubume bayo buthambile kwaye bubonakalisiwe. Zihlala zaziswa kumanzi anamanzi acocekileyo kuba ziveliswa ngokulula. Bahlala benobungakanani obukhulu beesentimitha eziyi-8.
ICaracol ibhiyozela: Ikwaziwa kananjalo ngegama lenkumba kwaye yenye yezo zinogobolondo ophawuleka kunayo yonke. Inemigca enemibala eluhlaza nidityaniswe neminye imigca emnyama. Igobolondo likhazimla kakhulu ngombala otyheli kunye nemigca emnyama. Ubungakanani bayo obukhulu ziisentimitha ezi-3.
Imigibe ye-aquarium yaselwandle
Imigibe kwiilwandle zasemanzini isebenza umsebenzi ofanayo nowamanzi amatsha. Banokunceda kwi ukucoca i-aquarium ngokutya intsalela yokutya kweentlanzi kunye nezinye izityalo ezifileyo. Kufuneka uluthathele ingqalelo uhlobo lweentlobo zeenkumba kunye neentlobo zeentlanzi esinazo kwi-aquarium.
Kukho iintlobo ezithile ezihambelana ngakumbi nezinye ngokuxhomekeke kubalinganiswa. Kukho amaxesha amaninzi omhlaba oza kulwa nabanye. Kukwanjalo nakwimigibe.
Unyango lweminenke ye-aquarium
Nangona iminenke ye-aquarium iluncedo njengesixhobo sokucoca, kufuneka ikhunjulwe ukuba unokuzala okuphezulu. Ukuba awulumkanga, unokuba nohlaselo kwiiveki ezimbalwa. Akufanele ube neenkumba ezininzi kwi-aquarium, njengoko zinokungcolisa amanzi ngokukhawuleza. Benza oku ngokusebenzisa ilindle eliphezulu kwii-nitrites kunye nee-nitrate. Uxinzelelo oluphezulu lwe-nitrites kunye ne-nitrate kwi-aquarium inokukhokelela ekukhuleni okukhulu kwe-algae.
Ngaphambi kokushiya inkumba kwi-aquarium, kufuneka uqinisekise ukuba ngaba ezi zinto ziphilayo ziya kuzitya izityalo eziphilayo okanye hayi. Ngokwesiqhelo uninzi lwabo alwenzi, kodwa kunokwenziwa ukuba ukutya kuyasilela.
Ukunyanga iminatha ye-aquarium kukho ezinye iintlobo eziyityayo. Nangona kunjalo, ayisiyiyo enye yeendlela ezilungileyo onokukhetha kuzo. Eyona nto ilungileyo yile lawula ukutya okunikwa iintlanzi, tyisa ukutya xa sele zivukile ukuze kungabikho kutya kuninzi kwiminatha. Imigibe ivelisa ngokukhawuleza kuba inenani elikhulu lezixhobo.
Enye yezona ndlela zibalaseleyo zokuphelisa iminatha ye-aquarium kukubeka iletisi ngobusuku bonke kwaye uyikhuphe ngosuku olulandelayo igcwele iminenke. Ngale ndlela siza kufumana uninzi lwabo ngaphandle.
Ngaba unokufumana isifo senkumba kwi-aquarium?
Ukuba iinkumba zinokutya okuninzi kunye neemeko ezilungileyo ziya kuzala ngesantya esiphezulu. Konke oku kuya kuxhomekeka kuhlobo esinalo kunye neemeko ezithanda ukukhula kakuhle kwesilwanyana. Ukuba sinezinto ezingaphezulu kwesondlo kunye neemeko ezilungileyo zeminenke, Ziyakuvelisa ngesantya esiphezulu ukuya kwinqanaba lokuba sisibetho.
Uyisusa njani iminenke kwi-aquarium
Njengoko besesitshilo ngaphambili, kukho ezinye iintlobo ezazityiwa kunye neenkumba. Nangona kunjalo, ayisiyongcamango ilungileyo kuba kufuneka sisuse ezi ntlobo xa singenazo iinkumba kwi-aquarium.
Umxholo kukusetyenziswa kakuhle kwezixhobo kwaye ungabaniki ukutya okuninzi. Lawula kakuhle isixa sokutya esinikwa iintlanzi ukuze kungabikho zinkunkuma zininzi emazantsi e-aquarium kwaye kuyafana kwizityalo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neminatha ye-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » Iminenke ye-Aquarium